Hirshabeelle oo shaacisay qorsho lagu sugayo Amniga doorashooyinka | XORRIYA NEWS
Home Wararka Hirshabeelle oo shaacisay qorsho lagu sugayo Amniga doorashooyinka
Hirshabeelle oo shaacisay qorsho lagu sugayo Amniga doorashooyinka
Wasaaradda amniga maamul gobaleedka Hirshabeelle ayaa shaacisay qorsho lagu sugayo amniga magaalooyinka Hirshabeelle oo ay ka socdaan howlo lagu xulayo baarlamaanka labaad ee maamulkaas.
Wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa sheegay in Hirshabeelle ay galeyso waqti doorasho, isla markaana siwyen ay u adkeeynayaan Amniga guud ahaan degaannada Maamulkaas.
Waxaa uu sheegay in dadaalka ay ugu jiraan sugida amniga ay iska kaashaan doonaan, ciidamada dowlada, ciidamada AMISOM iyo booliska Hirshabeelle si loo adkeeyo amniga inta ay socdaan howlaha doorashooyinka.
Wasiirka oo la hadlay VOA ayaa waxaa uu sheegay in kulan uu la qaatay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya, Danjire Francisco Madeira,isla markaana uu kala hadlay sidii AMISOM uga caawin laheyd sugida Amniga doorashooyinka Hir-Shabeelle.
Hadalka Wasiirka Amniga Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli muddo bil gudaheed ah magaalada jowhar oo ah caasimadda maamulka Hirshabeelle lagu dilay laba kmaid ah xildhibaannada maamulkaas kana mid ahaa Golaha Wasiirada Hirshabeelle.